Maalinta: Meey 28, 2017
Wadada Gaadiidka Dadweynaha ee Degmooyinka Cusub ee Diyarbakir
Wadada Gaadiidka Dadweynaha ee Meelaha Dejinta ee Cusub ee Diyarbakır: Diyarbakır Dowlada Hoose ee Magaalo Weynaha waxay sii wadaa inay dejiso jidadka gaadiidka dadweynaha si ay ugu suuragasho muwaadiniinta inay si fudud uga soo baxaan bartamaha magaalada si sahlan oo waqti gaaban ah. [More ...]
Dhamaystirka Mashruuca Smart Bike ee Ordu
Waxaa Dhameystiray Mashruuca Bikeega Smart ee Ordu: Mashruuca Dawlada Hoose ee Ordu Smart kaas oo loogu talagalay in loogu adeego degmooyinka Altınordu, Ünye iyo Fatsa ayaa lasoo gabagabeeyey. Duqa Magaalada Caasimada Enver Yılmaz, [More ...]
Gaadiidku waa casriyeynta Manisa: Marka la eego mashruuca isbedelka ee ay bilaabeen Dowlada Hoose ee Manisa, Yunusemre waxaa loo adeegsan doonaa baabuurta cusub ee '43' oo loo isticmaali doono degmada Yunusemre, Pelitalan, Çamlıca, Üçpınar, Maldan, Köseler, Durasallutes iyo Wadooyinka Duteszlen. [More ...]
Gawaarida Trabzon Surmene Tram iyo Baabuurka Cable-ka ee Cable
Trabzon Tram iyo Cable Car to Surmene: Tram iyo gaadhiga fiilada ee loo yaqaan 'Surmene' ee Trabzon: 25-27 May Day dhacdo oo lagu qabtay Xarunta dhaqanka ee Atatürk ee Ankara ayaa soo jiidatay dareen weyn. 3 [More ...]
Ramadan oo ku yaal Malatya Waqti xaddado bas ah ayaa isbeddelay
Motaş A.Ş., oo ah shirkad hoos timaad degmada Malatya Metropolitan District. Ramadaanka ayaa sidaas awgeed beddelay waqtiyadii adeegyada basaska qaarkood ee magaalada. BADDALO BASKA WAQTI WAQTIGII TOKI Ka Baxday Xarunta [More ...]
Dhibaatada gaadiidka waxaa laga wada hadlay Adana
Dhibaatada gaadiidka ayaa laga wada hadlay Adana: '12' oo ay soo qabanqaabisay Rugta Injineerrada Rayidka (IMO) Adana Laanta oo ay weheliso Laanta Istanbul. Golaha Gaadiidka ', Xarunta Dhaqanka ee Degmada Seyhan Yaşar Kemal waxay ku bilaabatay kaqeybgal deg deg ah. H.ÇAĞDAŞ KAYA: [More ...]
Maanta taariikhda: 28 May 1857 Heshiis khadadka Izmir-Aydin ah maanta
Maanta taariikhda Shirkadda 28 May 1857 ee Izmir-Aydin ayaa la aasaasay shirkad tareen oo ka timid kooxda British-ka ah ee Izmir-Aydin.